Bit By Bit - Hordhac - 1.2 Welcome to da'da digital
Da'da digital meel kasta waa, waxa uu u korayo, oo badala waxa suurtagal ah cilmi.
Fikradu dhexe ee kitaabkan waa in da'da digital abuuraa fursado cusub oo cilmi bulsho. Cilmi hadda u arki karaan dhaqanka, su'aalo, tijaabo ay maamulaan weydiin, iyo shaqeeyaan siyaabo in si fudud ay ahaayeen wax aan macquul aheyn ee la soo dhaafay ilaa xad la soo dhaafay. Dhinacyada la fursado cusub sidoo kale waxaa iman doona khataraha cusub; cilmi hadda waxyeelayn kara dadka siyaabo in ay ahaayeen wax aan macquul aheyn ee la soo dhaafay ilaa xad la soo dhaafay. Isha oo ka mid ah fursadaha iyo halisaha waa kala guurka ah laga bilaabo da'da analog in da'da digital ah. guurka Tani ma aysan dhicin oo dhan hal mar-sida fudud-biiro jeestay on-iyo, dhab ahaantii, guurka aan weli dhamaystiran. Laakiin, by Hadaba halkan waxaan soo arkay oo ku filan in la ogaado in ay wax weyn ka dhacaya.
Mid ka mid ah habka ay u aragto guurka waa in la raadiyo isbeddel ah ee nolol maalmeedkaaga. Waxyaabo badan oo noloshaada in loo isticmaalaa in lagu analog hadda waa digital. Waxaa laga yaabaa in aad loo isticmaalo si ay u isticmaalaan camera leh film oo hadda aad u isticmaali camera a digital (oo u badan tahay waa qayb ka mid ah phone aad digital). Waxaa laga yaabaa in aad loo isticmaalaa in lagu akhriyey wargeyska jirka ah oo hadda waxaad ka akhrisan wargeyska online. Waxaa laga yaabaa in aad loo isticmaalaa in lagu bixiyo wax lacag caddaan ah jirka iyo hadda aad bixiso credit card ah. Xaalad kasta, guurka ka analog in digital ka dhigan tahay in macluumaad dheeraad ah oo hadda la qabtay oo lagu kaydiyaa dijital ah.
Dhab ahaantii, markaan wax fiiriyey oo jooga wadar ahaan, saamaynta kala guurka waa yaab. Qadarka macluumaadka adduunka si degdeg ah sii kordhaya iyo ka badan oo macluumaad ah in lagu kaydiyaa dijital ah, kaas oo uu fududeeyaa falanqaynta, gudbinta, oo ku biirtay (Jaantuska 1.1) (Hilbert and López 2011) . All of this macluumaad digital ayaa iman in loo yaqaan "data weyn." Waxa intaa dheer in qarax this xogta digital, waxaa jira koritaan ah isku midka ah ee naga helaan awood kombiyuutarka (Jaantuska 1.1) (Hilbert and López 2011) . isbeddellada-kordhaya Kuwani macluumaad digital iyo kordhinta Kombuyuutarada-show calaamad u lahayn ee hoos.
Jaantuska 1.1: awoodda kaydinta macluumaadka iyo awood kombiyuutarka waxaa si weyn kordhaya. Dheeraad ah, oo macluumaadka lagu kaydiyo hadda waa ida digital (Hilbert and López 2011) . Isbeddelladan abuuraan fursado cajiib ah, waayo, cilmi bulsho.
Waayo, ujeedooyinka cilmi bulsho, waxaan qabaa feature ugu muhiimsan ee da'da digital waa kombiyuutarada meel kasta. Laga bilaabo sida mashiinada qolka yimaa-jiray oo kaliya ay heli karaan dawladaha iyo shirkadaha waa weyn, kombiyuutarada ayaa si joogto ah sii yaraanaya ee size oo ku sii kordhaya dadka. Tobankii sano ee kasta tan iyo 1980, waxaan soo arkay nooc cusub oo Kombuyuutarada ah: kombiyuutarada shakhsi, laptops, telefoonada smart, iyo Processor hadda gundhig (ie, kombiyuutarada gudaha ee qalabka sida baabuurta, daawanaya, iyo qalabka) (Waldrop 2016) . Kordhayay kuwan kombiyuutarada ubiquotous ka badan oo kaliya xisaabiyo samayn; waxay sidoo kale dareemi, dukaanka, iyo gudbiyaan macluumaadka.
Waayo, cilmi, saameynta ay kombiyuutarada meel kasta ugu fudud ee lagu arki online, jawi in si buuxda cabbiro iyo kasteba si tijaabo. Tusaale ahaan, dukaanka online si fudud kusoo qaadan karaa xogta saxda ah cajiib ah oo ku saabsan gadashada iyo wax iibsiga ee qaabka malaayiin macaamiisha. Dheeraad ah, dukaanka online si fudud randomize karaan macaamiisha qaar ka mid ah si ay u helaan mid ka mid waayo-aragnimo shopping iyo kuwa kale si kale u hesho. awood Tani in randomize on top of statistics ka dhigan tahay in dukaamada online joogto ah ordi karaan tijaabo kala sooca lahayn ay gacanta ku. Dhab ahaantii, haddii aad weligaa wax ka dukaanka online iibsaday dabiicaddiinna ayaa dabagal iyo aad hubaal ahayd ka qaybgale ah tijaabo ah, haddii aad u ogaa ama ma.
dunida Tani si buuxda u-qiyaasay-buuxda-randomizable waxaa kaliya ma dhacaya online; waxaa sii kordheysa dhacaya meel kasta. dukaamada Physical hore u ururiyaan xogta iibka aad u faahfaahsan, oo waxay yihiin horumarinta kaabayaasha si ay ula socdaan macaamiisha dhaqanka adeeganayay iyo qas tijaabo gelin dhaqanka ganacsi ee caadiga ah. In si kale loo dhigo, marka aad u malaynayso oo ku saabsan da'da digital waa in aad ma ahan oo keliya qabaa online, waa in aad u malaynayso in meel kasta. da'da Digital cilmi bulshada ku lug yeelan doontaa dadka lalana meelaha buuxda dijitaalka ah iyo dadka isticmaalaya qalabka dijitaalka dunida jirka ku lug doonaa.
Waxa intaa dheer in awood cabbirka ee dhaqanka iyo randomization daaweyno, da'da digital ayaa sidoo kale karti habab cusub oo loogu talagalay dadka si ay isgaadhsiin. Kuwani noocyada cusub ee isgaarsiinta ogolaan cilmi in uu ordo sahan cusub iyo in la abuuro iskaashi ballaaran la saaxiibadood iyo guud ahaan dadweynaha.
shaki A ku tusi kara in mid ka mid ahaa awoodaha kuwani waa run ahaantii cusub. Taasi waa, ee la soo dhaafay, waxaa jiray horumarka kale ee waaweyn ee kartida dadka si ay isgaadhsiin (tusaale ahaan, telegaraafka ah (Gleick 2011) ), iyo kombiyuutarada ayaa la qaadan dhaqso at qiyaastii heerka la mid ah tan iyo 1960 (Waldrop 2016) . Laakiin, waxa shaki this ka maqan waa in dhibic qaar badan oo la mid ah uu noqdo mid wax ka duwan (Halevy, Norvig, and Pereira 2009) . Halkan isbarbardhig aan jeclahay. Haddii aad qabsan kartaa image ah faras, ka dibna aad leedahay sawir. Oo, haddii aad qabsan karaan 24 images of faras per labaad, ka dibna aad leedahay a movie. Dabcan, filim waa uun farabadan of photos, laakiin kaliya kuwa shakiya adag dhiman sheegan in sawiro iyo filimo waa isku mid.
Cilmi waa in geeddi-socodka ah ee samaynta kala-guurka ah ka dhigan tahay kala guurka ka sawir si shineemada. guurka Tani macnaheedu ma aha in wax kasta oo aan ka baratay ee la soo dhaafay waa in la iska indho tiri. Sida mabaadi'da sawir wargeliyaan mabaadi'da shineemada, mabaadii'da cilmi bulsho ee la soo dhaafay warrami cilmi bulsho ee mustaqbalka. Laakiin, guurka sidoo kale ka dhigan tahay in aynaan sii wax la mid ah samaynayaan. Saas ma aha, waa in aan isku wajiyada ee la soo dhaafay la awoodaha ee la joogo iyo mustaqbalka. Tusaale ahaan, cilmi of Blumenstock iyo asxaabtii uu ahaa isku dar ah ee cilmi sahan dhaqanka waxa qaar ka mid ah wac laga yaabo xogta sayniska. Labada of maaddooyinka kuwa ahaayeen lagama maarmaan, mana jawaabaha sahanka mana diiwaanka telefoonka ahaantood ahaayeen ku filan. More guud ahaan, waxaan u malaynayaa in kordheysa cilmi bulsho u baahan doontaa in la isu geeyo cilmiga bulshada la sayniska xogta si ay ka faa'idaystaan ​​fursadaha da'da digital. In la sii wado qaadashada sawirada marka aan sidoo kale laga yaabaa samaynta filimada noqon lahaa qalad oo kaliya.